PTO SHAFT Mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - reducers, reducers kankana, boaty kankana, boaty planeta, reducers hafainganam-pandeha, mpanelanelana, kojakoja helikaly, faribolana kely, boaty fambolena, kodiarana traktera, kitapo kamiao, boaty kankana
Mitady loharano azo itokisana amin'ny faritra misy ny rafitra fiara PTO ve ianao? Ao amin'ny HZPT, dia hanome izay rehetra ilainao izahay mba hampitomboana ny fahombiazan'ny traktera sy ny fitaovam-pambolena. Manana foibe fizarana tongotra 60,000 metatra toradroa izahay izay mitahiry faritra maro amin'ny zana-kazo PTO avy amin'ireo mpamokatra ambony ao amin'ny indostria. Ny lisitry ny lisitray betsaka dia ahafahanay manome ireo vokatra ireo amin'ny vidin'ny fifaninanana.
Rehefa mijery ny safidinay amin'ny faritra PTO ianao, dia ho hitanao ny zava-drehetra manomboka amin'ny zioga sy ny zoro mankany amin'ny rafitra fandefasana sy ny tehina. Raha tsy azonao antoka izay vokatra mety indrindra amin'ny fitaovana ampiasainao, azafady ampahafantaro anay. Ny ekipanay mahay dia afaka manondro anao amin'ny làlana tsara.
Indostrialy Drive Shaft
Trcuk driveline / hazo famindrana ho an'ny kamio
Shaft mavesatra mavesatra ho an'ny indostria (ILP)
Modely PTAF SHAFTS